Gudiga Bordhiga Ururka Horumarinta Soomalida Itoobiya Oo Shir Lagu Dar-dargalinayo Horumarinta Ururka Ku Yeeshay Xafiiska Maamulka DDSI. - Cakaara News
Jigjiga(CN) Khamiis.06.Nov.2014, Shirkan oo ay shir gudoon ka hayd madaxwayne ku xigeenka DDSI ahna waasiirka madaxtooyada DDSI marwo Sucaad Axmed Faarax, islamarkaana ah gudoomiyaha gudiga bordhiga UHSI ayaa waxaa kale oo ka soo qaybgalay maareeyaha ururka horumarinta soomalida itoobiya ahna wasiir ku xigeenka madaxtooyada mudane Cabdikuus C/laahi iyo dhamaan xubnaha gudiga bordhiga.
Waxaana shirkan ugu horayntii ka soo jeediyay warbixin iyo anjandayaasha shirka maareeyaha UHSI mudane Cabdi kuus isaga oo sheegay in ay anjandayaasha ka mid yihiin dhagaysiga warbixinta waxqabadka ururka, kawada hadalka qaabdhismeedka ururka (structure), ka wada hadalka barkado cusub oo laga qodidoona qaarka mid ah degmooyinka deegaanka, dayac tirka iyo qalabaynta dugsiga modelka hoyga Jigjiga, iyo waliba ka wada hadalka xafiis cusub oo laga hirgaliyo xarunta dalka ee Addis’Ababa.
Wuxuuna maareeyuhu soo jeediyay warbixinta waxqabadka ururka, warbixintaasi oo si mug leh uga waramaysay guulo waawayn ee uu ururka ka soo hooyay qorshayaashii horyaalay gaar ahaan dhinacyada adeegyada aas aasiga ah ee uu ka hirgaliyay deegaanka sida dhisida iyo tayactirka isguulada, soo saarida iyo kaydinta biyaha. Wuxuuna maareeyehu sheegay in 7 barkadood uu ururku hada ka qodidoono degmooyinka Jigjiga, tuli, Araarso,Dhagax buur Birqod,Beercaano iyo Raaso.
Dhankeeda madaxwayne ku xigeenka DDSI marwo Sucaad Axmed ayaa si qoto dheer uga warbixisay jihooyinka iyo qorshayaasha lagu horumarinayo ururka iyada oo sheegtay in siwayn loo balaadhiyay guud ahaanba xidhiidhka uu ururku la leeyahay hayadaha, dawlada, hayadaha aan dawliga ahayn, iyo dhinaca xidhiidhka qurba joogta u dhalatay deegaanka kuwaasi oo si meeqaam sare ah uga qaybqaadanaya qorshayaasha lagu horumarinayo UHSI.
Gabagabadii gudiga bordhigu wuxuu shirkaasi ku ansaxiyay guud ahaanba anjandayaashaasi horyaalay waxaana laysla qaatay qorshayaasha lagu horumarinayo UHSI.